RASMI: Maalintii Ay Taageerayaasha Real Madrid Sanadaha Badan Sugayeen Oo Laga Dhawaaqay Iyo Bandhigii Ronaldo Mid Ka Wayn Oo Eden Hazard Loo Diyaarinayo. - Gool24.Net
RASMI: Maalintii Ay Taageerayaasha Real Madrid Sanadaha Badan Sugayeen Oo Laga Dhawaaqay Iyo Bandhigii Ronaldo Mid Ka Wayn Oo Eden Hazard Loo Diyaarinayo.
Kooxda Real Madrid ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxay si rasmi ah ugu shaacisay waqtiga rasmiga ah ee ay saxaafada iyo taageerayaasha kooxdeeda u soo bandhigayso heshiiska Eden Hazard.
Kadib sanado badan oo ay taageerayaasha Real Madrid sugayeen in Eden Hazard uu kooxdooda soo gaadho, waxa uu ugu danbayn Hazard soo cago dhigan doonaa Santiago Bernabeu isaga oo si rasmi ah qalinka ugu duugi doona heshiis waqti dheer ah.
Real Madrid ayaa si rasmi ah u shaacisay in barri oo khamiis ah ay saxaafada iyo jamaahiirta kooxdeeda si aan hore loo arag ugu soo bandhigi doonaan Eden Hazard kaas oo loo samayn doono xaflad bandhig oo xataa ka wayn tii Cristiano Ronaldo loo sameeyay sanadkii 2009 kii.
Eden Hazard ayaa noqonaya xidigii ugu horeeyay ee ugu muhiimsan ee ay Real Madrid la soo wareegtay tan iyo wixii ka danbeeyay sanadkii 2009 kii markaas oo ay Ronaldo ka bixiyeen lacagtii waqtigaas aduunka ugu saraysay.
warka ay Madrid ku shaacisay bandhiga Hazard ayaa lagu yidhi: “Ciyaartoyga Eden Hazard barri ayaa la soo bandhigi doonaa- Khamiista June 13, marka ay saacadu tahay 7:00PM iyada oo ay ka dhici doonto Santiago Bernabéu stadium”.
Eden Hazard ayaa markii ugu horaysay isaga oo xidhan maaliyada cadaanka ah ee Real madrid waxa uu barri soo gali doonaa Santiago Bernabéu wuxuuna kadib la hadli doonaa saxaafada.
Waxaa la filayaa in warbaahin aad u tiro badan iyo waliba taageerayaal xad dhaaf ahi ay ka soo muuqan doonaan Santiago Bernabéu si ay markhaati ugu noqdaan maalintii ay waqtiga dheer sugayeen ee imaatinka Hazard.
Kadib markii uu Eden Hazard soo ciyaaray kulamadii xulkiisa Belgium waxa uu hadda soo gaadhi doonaa xafiisyada Santiago Bernabéu iyada oo inta aan heshiiskiisa la dhamaystirin waxa uu mari doonaa tijaabada caafimaadka.
Real Madrid ayaa maanta saxaafada u soo bandhigtay saxiixa Luka Jovic laakiin bandhiga Eden Hazard ee Santiago Bernabéu waxa uu barri oo khamiis ah noqon doonaa mid xusuus badan reebi doona oo gabi ahaanba ka duwan wixii maanta ay Madrid u samaysay Luka Jovic.